အန္တာတိကနှင့်ပတ်သက်။ 24 သိချင်စိတ် | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
La အန္တာတိက ၎င်းသည် (၁၆၀၃ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရသည်) ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကလူ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေသည်စက်လုံးကျကြောင်းနှင့်ထိုစဉ်ကဝင်ရိုးစွန်းဒေသနှင့်အလွန်နီးကပ်သောမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်နှင်းဖုံးလွှမ်းနေသောတိုက်ကြီးareasရိယာများရှိသည်ကိုသိရှိထားခြင်းအားဖြင့်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်အလားတူအရာတစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ရသည်။
၁၈ ရာစုတွင်စပိန်နှင့်တောင်အမေရိကတို့သည်ဤနွေရာသီတွင်စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ကျန်မသေနိုင်သေးသောလူသေများသည်ဤမယုံနိုင်လောက်သောတိုက်ကြီးတည်ရှိရာဤအဖြူရောင်သဲကန္တာရ၏တည်ရှိမှုကိုသိရန်နောက်ထပ်ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရပ်မှအန္တာတိကသည်၎င်း၏နက်နဲသောအရာများကိုတဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပြခဲ့သည်၊ သို့သော် ... သင်မသိသေးသောအရာအနည်းဆုံး ၂၄ ခုရှိသည်။ သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အန္တာတိကနှင့်ပတ်သက်သည့်သိလိုစိတ် ၂၄ ခု။
ပုံ - ခရစ်စတိုဖာမိုက်ကယ်
အန္တာတိကတိုက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသောသဲကန္တာရဖြစ်ပြီး၎င်းထက်မကနည်းပါးသည် ၁၄.၂ သန်းကီလိုမီတာရှိသည်။ မယုံနိုင်စရာ extension တစ်ခု၊
သင်သည်ဤတိရိစ္ဆာန်များကိုဤနေရာတွင်အဘယ်ကြောင့်တွေ့ရပြီးနွေးထွေးသောသွေးဖြစ်သည့်တိုင်ဤတွင်နေထိုင်သောဘဝသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာယနေ့အထိအနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘယ် -93,2ºC။ သေချာတာပေါ့နင်တို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ဟာနွေးထွေးတဲ့ဟင်းချိုအနည်းငယ်လိုချင်တာပေါ့ဟုတ်လား?
သင်၏ဉာဏ်ပညာသွားနှင့်နောက်ဆက်တွဲကိုဖယ်ရှားမထားပါကသင်သည်အန္တာတိကတွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ဟာသလားဟင် သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်၏ထိုအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလုံးကိုလုံးဝမလိုအပ်ပါ။ ပထမဆုံးထွက်လာသည့်အခါထွက်လာလျှင်နာကျင်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေပြီးအခြားတစ်ချက်မှထွက်လာသည့်အခါဘက်တီးရီးယား၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
သူတို့ကိုဝံဟုခေါ်ကြသော်လည်း ပိုလန်တကယ်တော့ သငျသညျကိုသာအာတိတ်၌သူတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်။ အန္တာတိကတိုက်မှာဆိုရင်ပင်ဂွင်းတွေအများကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ပုံ - Lin padgham
နွေးထွေး။ အေးသောဒေသများ၌သာမီးတောင်များသာရှိသည်ဟုသင်ထင်ပါကသင်မှားခဲ့သည်။ အန္တာတိကတိုက်တွင်မီးတောင်လည်းရှိသည်။ ထိုအတက်ကြွသည်။ ၎င်းသည်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ အမည်ရှိ re ရဘတောင်နှင့် crystals ထုတ်ပယ်။
ပုံ - နံနက် ၂၃ နာရီ
အဲဒီမှာ 300 ရေကန်များ သူတို့သည်ဤတိုက်ကြီးတွင်အေးခဲမနေပါ။ လျှော်ချင်ပါသလား ဟင့်အင်း၊
ပုံ - ပတေရု rejcek
ဘယ်မှာဒီတိုက်ကြီး၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ရှိပါသလား နှင်းမကျ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2သန်းအတွင်းလုံးဝဘာမျှမ။
သို့သော်မျက်စိအတွင်းတိမ်ရှိသည်။ ငါတို့ထင်တာကတော့ပွင့်လင်းတဲ့ရေတွေပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာ အနီလည်းရှိ၏.
အန္တာတိကရှိသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး သည်သူ၏မိန်းကလေးနှင့်သာတွေ့ဆုံနိုင်သည် 45 မိနစ်.
ဒီမှာနေရတာဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။ တိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ် အအေး၊ (၎င်းသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်၏ ၂၀၀၀ မီတာအထက်) ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသည်။ သို့တိုင်အန္တာတိကတွင်လူသားများနေထိုင်ကြသည်။
ဒါပေမယ့်အစီအစဉ်မရှိပါဘူး တကယ်တော့, အန္တာတိကတိုက်မှာအချိန်ဇယားမရှိဘူး.
တစ်ချိန်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၂ သန်းက၊ ဒီနေ့ကယ်လီဖိုးနီးယားလောက်ပူတယ်။ ၎င်းတွင်အမေဇုံဒေသသို့မဟုတ်အရှေ့တောင်အာရှရှိအပူပိုင်းသစ်တောများရှိသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကအခုပြောမှာလား။
ပုံ - အဖြစ်မှန်
သင်ယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကထိုအရာရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည် ခုနစျပါးခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ အန္တာတိကမှာ။
အန္တာတိကမှာသာရှိတယ် 1 ATM စက်များ1,01325 ဘား, ဒါမှမဟုတ် 101325 pascals သော။
မိုးရွာသော်လည်းခဲယဉ်းသည်။ ရေချို၏ ၉၀% သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အေးခဲတယ်။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပင်လယ်တွေအရည်ပျော်မယ်ဆိုရင်မီတာအတော်များများမြင့်တက်နိုင်လိမ့်မယ် ...
လူသားများသည်နေရာအများစုနှင့်နယ်မြေများကိုနေရာချထားရန်အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေသည် (ယနေ့တိုင် ဆက်လက်၍)၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်အာဂျင်တီးနားသည်တိုက်ကြီး၏အစိတ်အပိုင်းကိုတောင်းဆိုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကိုအန္တာတိကသို့ထိုတွင်မွေးဖွားရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူသည်အန္တာတိကတိုက်တွင်ပထမဆုံးမွေးဖွားသောလူသားဖြစ်သည်။
ဘယ်မှာရှိရာအရပ်၌ဤလောကသို့ကြွလာပေမယ့် လေဟာ 320km / h အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်…ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါ။
အများဆုံးတိုင်းတာခဲ့သောရေခဲစိုင်သည်ဂျမေကာထက်ပိုသည်။ ၁၁၀၀၀ ကီလိုမီတာ။ သို့သော် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကုန်းမကြီးနှင့်ကွဲသွားခဲ့သည်။
တိုက်ကြီးအများစုကိုရေခဲဖုံးလွှမ်းထားသည်။ စုစုပေါင်း၏ 1% မှလွဲ။, အဘယ်မှာရှိ Polar အလင်း (ထို။ ) နှင့်အတူအရည်ပျော်ရှိရာ
အရာ) ဒီအေးစက်နေတဲ့သဲကန္တာရ၌နွေ ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။
နွေးထွေး ဆွဲငင်အားအတွက်သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် ဒေသတွင်း၌။
အန္တာတိကတိုက်တွင်ရေခဲများ၏အထူသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်သည် 1,6km ။
ဒီမှာချီလီကသာလူတွေချည်းပဲ။ ၎င်းတို့တွင်ကျောင်း၊ စာတိုက်၊ ဆေးရုံ၊ အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းလွှမ်းခြုံမှုရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ရုပ်ပုံများ » အန္တာတိကနှင့်ပတ်သက်။ 24 သိချင်စိတ်